Weli ma cadda in Iswiidhen ciidamo u direyso Buuraha Golan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Weli ma cadda in Iswiidhen ciidamo u direyso Buuraha Golan
La daabacay torsdag 13 juni 2013 kl 12.51
Sawirle: Menahem Kahana/Scanpix.
Iswiidhen weli go’aan kama gaarin in ay ciidamo ku biirineyso ciidamada nabad-ilaalinta Qaramada Modoobey oo loo yaqaan Undof, kuna sugan aaggaga u dhow xadka Buuraha Golan.
- Weli halkaa ma gaarin. Waxaan hadda ku hawllanahay sidii aan arrintaas u eegi lahayn iyo sidii aan wadatashi ula samayn cidda ay khuseyso. Sidaas waxaa idaacadda Ekot u sheegay wasiirka arrimaha Carl Bildt.
Qaramada Midoobey ayaa Iswiidhen kala soo xiriiray haddii ay diyaar u yihiin ciidamo u diraan aaggaas.Laakiin Iswiidhen weli wax jawaab ah kama bixin.
– Waxaan u malaynayaa in ay la xiriireen dalalka kale ee waqooyiga Yurub dhaca. Haddase waxaan ku jirnaa in aan arrinta marka hore lafagurno. Mabda’ ahaan mar walba oo nala weyddiiyo su’aal dhab, jawaab dhab ah ayaan ka bixinnaa. Hadda waxaa wadatashi kula jirnaa dalalka kale. Sidaasna waxaa yiri Carl Bildt.
Wuxuu kaloo sheegay in uusan iska indha-tireyn in xaaladda ammaanka aaggagaasi ay soo xumaatay. Khatarta ka iman karta in ciidamadayadu halkaas ku sugnaadaan ayaa waxa ugu weyn oo aan miisaanka saareynno marka aan go’aanka ka gaareynno in aan ciidamo direynno iyo in kale.
- Waa run oo khatarta ka iman karta waa mid micne weyn noogu fadhida.